ဒါအချက်တွေရှိရင် ဆီးကျောက်တည်နေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ဒါအချက်တွေရှိရင် ဆီးကျောက်တည်နေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ဆီးကျောက်တည်တဲ့ဆိုတဲ့ ပြဿနာအကြောင်း မကြာခဏ ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဆီးသွားရင်နာတာ၊ ဆီးသွားရင် ညှစ်သွားရတာ စတာတွေက ဆီးကျောက်တည်တာရဲ့ လက္ခဏာတွေပေါ့။ ဆီးလမ်းကြောင်းမှာ ကြိုက်တဲ့ ဘယ်နေရာမှာမဆို ဆီးကျောက်တည်နိုင်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်မှာလည်း တည်နိုင်တယ်၊ ဆီးအိတ်မှာလည်း ကျောက်တည်နိုင်ပါတယ်။
ဆီးကျောက်ကိုဆေးပညာအရ (renal lithiasis, nephrolithiasis) လို့ခေါ်တတ်ပြီး ဆီးထဲမှာပါတဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေနဲ့ ဆားဓါတ်တွေက ကျောက်အဖြစ်ပြောင်းသွားပြီး ဆီးလမ်းကြောင်း တစ်နေရာရာမှာ ပိတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ကျောက်တည်တာကြောင့် ဆီးသွားရခက်တာ နာကျင့်တာမျိုး ဖြစ်မယ့်အပြင် ကျောက်တည်တဲ့နေရာဝန်းကျင်မှာ ဆီးတွေအိုင်နေပြီး ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာ၊ ပိုးဝင်တာကို မထိန်းနိုင်တဲ့အခါ နောက်ပိုင်း ပိုးဆိပ် ပြန့်တာတွေအထိ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ နောက်ကျမှ သိတာမျိုး မဖြစ်ရလေအောင် ဆီးကျောက်တည်တဲ့အခါ ဘယ်လို လက္ခဏာတွေရှိလဲဆိုတာ သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုအချက်တွေရှိနေရင် ဆီးကျောက်တည်နေပြီဆိုတာ သိနိုင်မလဲ။
( ၁ ) နောက်ဘက်ခါးအောက်ပိုင်း နာနေတတ်ပါတယ်။
မီးဖွားရင် ခံစားရတဲ့ အနာမျိုးနဲ့ ယှဉ်ပြီးပြောရလောက်အောင် ဆီးကျောက်တည်တဲ့ နာကျင်မှုက တော်တော်ပြင်းထန်ပါတယ်။
ရုတ်တရက်ကြီးမှ ထနာတာလည်းဖြစ်နိုင်သလို နောက်ဘက်ခါးအောက်ပိုင်းနားလေးမှာ နာလိုက်ပျောက်လိုက်ဖြစ်နေတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
( ၂ ) ဆီးသွားရင် နာကျင်မယ်။ ဆီးခဏခဏသွားချင်နေမယ်။
ဆီးအိမ်နဲ့ ဆီးသွားပြွန်ကြားထဲမှာ ကျောက်တည်နေပြီဆိုရင်တော့ ဆီးသွားရင် ကျင်တာ၊ ဆီးခဏခဏ သွားချင်နေတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တဲ့ လက္ခဏာနဲ့ ဆင်တူနေတာကြောင့် သူတို့ နှစ်ခုကို မှားတတ်ပါတယ်။
မတူတာကတော့ ဆီးကျောက်တည်တဲ့ လူတွေက ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာထက်စာရင် ဆီးခဏခဏ သွားချင်နေတာပါပဲ။
( ၃ )ဆီးထဲ သွေးပါ။
ဆီးသွားရင်းနဲ့ သွေးစလေးတွေ တွေ့ရတာကလည်း ဆီးကျောက်တည်တဲ့သူတိုင်း ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ ပြဿနာတစ်ခုပါ။
တစ်ချို့ ပြဿနာတွေမှာဆို သွေးကို အထင်းသားမြင်နေရတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ မျက်လုံးနဲ့ မမြင်နိုင်လောက်တဲ့ သွေးဆဲလ်လေးတွေ ဆီးထဲ ပါလာတတ်တာကြောင့် ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ ဆီးစစ်ဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။
( ၄ ) ဆီး အရောင် နောက်နေတတ်ပါတယ်။
ဆီးအရောင်က ကြည်မနေဘဲ နောက်တော်တော်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ ဆီးလမ်းကြောင်း တစ်နေရာရာမှာ ပိုးဝင်နေတာကို ပြောပြနေတာပါ။
ဆီးနောက်တဲ့အပြင် အဖြူဖတ်တွေပါ ပါလာပြီဆိုရင်တော့ ဒါဆီးထဲ ပြည်ပါလာတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
( ၅ ) ဆီးကျန်သလို ခံစားနေရတတ်ပါတယ်။
ဆီးကျောက်ကြောင့် ဆီးအကုန်မသွားနိုင်တော့ဘဲ ဆီးကျန် နေသလို ခံစားနေရတတ့်ပါတယ်။
တစ်ချို့ဆို တော်တော်လေးညှစ်မှ ဆီးဖြည်းဖြည်းထွက်လာတတ်ပြီး တစ်ချို့ဆို လုံးဝကို ဆီးမထွက်နိုင်တော့တာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ဆီးလုံးဝ မပေါက်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ နီးစပ်ရာ ဆေးခန်းကို အမြန်ဆုံး သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
( ၆ ) ချမ်းတုန် ဖျားတတ်ပါတယ်။
ဒီလို နာလည်းနာတယ်၊ ချမ်းတုန်ပြီးလည်းဖျားတယ်၊ အပူချိန်လည်းများတယ် ဆိုရင် ဒါဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်နေပြီဆိုတဲ့ လက္ခဏာပါ။
ဒါတွေကတော့ ဆီးကျောက်တည် နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း သိနိုင်တဲ့ အချက်တွေပါ။ စောစောသိ စောစောကုတော့ မြန်မြန်ပျောက်တာပေါ့ ။ ။
ရေးသားသူ- Dr. Thin Yadanar @ Frances
ဒါအခကျြတှရှေိရငျ ဆီးကြောကျတညျနတော ဖွဈနိုငျပါတယျ
ဆီးကြောကျတညျတဲ့ဆိုတဲ့ ပွဿနာအကွောငျး မကွာခဏ ကွားဖူးကွမှာပါ။ ဆီးသှားရငျနာတာ၊ ဆီးသှားရငျ ညှဈသှားရတာ စတာတှကေ ဆီးကြောကျတညျတာရဲ့ လက်ခဏာတှပေေါ့။ ဆီးလမျးကွောငျးမှာ ကွိုကျတဲ့ ဘယျနရောမှာမဆို ဆီးကြောကျတညျနိုငျပါတယျ။ ကြောကျကပျမှာလညျး တညျနိုငျတယျ၊ ဆီးအိတျမှာလညျး ကြောကျတညျနိုငျပါတယျ။
ဆီးကြောကျကိုဆေးပညာအရ (renal lithiasis, nephrolithiasis) လို့ချေါတတျပွီး ဆီးထဲမှာပါတဲ့ သတ်တုဓါတျတှနေဲ့ ဆားဓါတျတှကေ ကြောကျအဖွဈပွောငျးသှားပွီး ဆီးလမျးကွောငျး တဈနရောရာမှာ ပိတျနတောဖွဈပါတယျ။ ဒီလို ကြောကျတညျတာကွောငျ့ ဆီးသှားရခကျတာ နာကငျြ့တာမြိုး ဖွဈမယျ့အပွငျ ကြောကျတညျတဲ့နရောဝနျးကငျြမှာ ဆီးတှအေိုငျနပွေီး ဆီးလမျးကွောငျးပိုးဝငျတာ၊ ပိုးဝငျတာကို မထိနျးနိုငျတဲ့အခါ နောကျပိုငျး ပိုးဆိပျ ပွနျ့တာတှအေထိ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။
ဒီတော့ နောကျကမြှ သိတာမြိုး မဖွဈရလအေောငျ ဆီးကြောကျတညျတဲ့အခါ ဘယျလို လက်ခဏာတှရှေိလဲဆိုတာ သိထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။
ဘယျလိုအခကျြတှရှေိနရေငျ ဆီးကြောကျတညျနပွေီဆိုတာ သိနိုငျမလဲ။
( ၁ ) နောကျဘကျခါးအောကျပိုငျး နာနတေတျပါတယျ။
မီးဖှားရငျ ခံစားရတဲ့ အနာမြိုးနဲ့ ယှဉျပွီးပွောရလောကျအောငျ ဆီးကြောကျတညျတဲ့ နာကငျြမှုက တျောတျောပွငျးထနျပါတယျ။
ရုတျတရကျကွီးမှ ထနာတာလညျးဖွဈနိုငျသလို နောကျဘကျခါးအောကျပိုငျးနားလေးမှာ နာလိုကျပြောကျလိုကျဖွဈနတောမြိုးလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
( ၂ ) ဆီးသှားရငျ နာကငျြမယျ။ ဆီးခဏခဏသှားခငျြနမေယျ။
ဆီးအိမျနဲ့ ဆီးသှားပွှနျကွားထဲမှာ ကြောကျတညျနပွေီဆိုရငျတော့ ဆီးသှားရငျ ကငျြတာ၊ ဆီးခဏခဏ သှားခငျြနတောမြိုးတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။
ဆီးလမျးကွောငျးပိုးဝငျတဲ့ လက်ခဏာနဲ့ ဆငျတူနတောကွောငျ့ သူတို့ နှဈခုကို မှားတတျပါတယျ။
မတူတာကတော့ ဆီးကြောကျတညျတဲ့ လူတှကေ ဆီးလမျးကွောငျးပိုးဝငျတာထကျစာရငျ ဆီးခဏခဏ သှားခငျြနတောပါပဲ။
( ၃ )ဆီးထဲ သှေးပါ။
ဆီးသှားရငျးနဲ့ သှေးစလေးတှေ တှရေ့တာကလညျး ဆီးကြောကျတညျတဲ့သူတိုငျး ကွုံတှရေ့တတျတဲ့ ပွဿနာတဈခုပါ။
တဈခြို့ ပွဿနာတှမှောဆို သှေးကို အထငျးသားမွငျနရေတာမြိုး မဟုတျဘဲ မကျြလုံးနဲ့ မမွငျနိုငျလောကျတဲ့ သှေးဆဲလျလေးတှေ ဆီးထဲ ပါလာတတျတာကွောငျ့ ဓာတျခှဲခနျးမှာ ဆီးစဈဖို့လညျး အရေးကွီးပါတယျ။
( ၄ ) ဆီး အရောငျ နောကျနတေတျပါတယျ။
ဆီးအရောငျက ကွညျမနဘေဲ နောကျတျောတျောဖွဈနပွေီဆိုရငျတော့ ဆီးလမျးကွောငျး တဈနရောရာမှာ ပိုးဝငျနတောကို ပွောပွနတောပါ။
ဆီးနောကျတဲ့အပွငျ အဖွူဖတျတှပေါ ပါလာပွီဆိုရငျတော့ ဒါဆီးထဲ ပွညျပါလာတာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
( ၅ ) ဆီးကနျြသလို ခံစားနရေတတျပါတယျ။
ဆီးကြောကျကွောငျ့ ဆီးအကုနျမသှားနိုငျတော့ဘဲ ဆီးကနျြ နသေလို ခံစားနရေတတျ့ပါတယျ။
တဈခြို့ဆို တျောတျောလေးညှဈမှ ဆီးဖွညျးဖွညျးထှကျလာတတျပွီး တဈခြို့ဆို လုံးဝကို ဆီးမထှကျနိုငျတော့တာမြိုးတှေ ရှိပါတယျ။ ဆီးလုံးဝ မပေါကျနိုငျတော့ဘူးဆိုရငျတော့ နီးစပျရာ ဆေးခနျးကို အမွနျဆုံး သှားဖို့လိုအပျပါတယျ။
( ၆ ) ခမျြးတုနျ ဖြားတတျပါတယျ။
ဒီလို နာလညျးနာတယျ၊ ခမျြးတုနျပွီးလညျးဖြားတယျ၊ အပူခြိနျလညျးမြားတယျ ဆိုရငျ ဒါဆီးလမျးကွောငျး ပိုးဝငျနပွေီဆိုတဲ့ လက်ခဏာပါ။
ဒါတှကေတော့ ဆီးကြောကျတညျ နပွေီဆိုတဲ့အကွောငျး သိနိုငျတဲ့ အခကျြတှပေါ။ စောစောသိ စောစောကုတော့ မွနျမွနျပြောကျတာပေါ့ ။ ။
ရေးသားသူ- Dr. Thin Yadanar @ Frances